Qalabaynta gaarka ah iyo qandaraaska R & D Apicmo cdmo Wax soo saarka
Adeegyada Our > Qalabaynta gaarka ah iyo heshiiska R & D
Horumarinta wadada synthetic
Qiyaasta miisaanka-laga bilaabo grams illaa Metric Tons
Mudaaharaad haddii loo baahdo
Taageero dhamaystiran oo ay ku jiraan HPLC, GC-MS iyo NMR
Qalabka halkaasoo habka wax soo saarku horey u jirey, APICMO waxay bixin kartaa qandaraaska iyo adeegga wax soo saarka macaamiisha ee qeexida u gaarka ah. Marka laga soo tago adeegyada kor ku xusan, waxaan sidoo kale bixinnaa adeeg khaas ah oo khaas ah oo adeegsanaya (aan kharash dheeraad ah lahayn) si loo hubiyo in, haddii ay suurtagal tahay, waxaan isticmaali karnaa ilaha tayada sare ee sicirka suuqa.
APICMO sidoo kale waxay awood u leedahay inay bixiso adeegga cilmi-baarista iyo horumarinta qaaska ah oo loogu talagalay shuruudaha gaarka ah ee macaamiisha. Waxaan leenahay rikoodh wanaagsan oo lagu xallin karo caqabadaha adag ee maadada dheddigga ah ee macaamiisha iyo mashaariicda waxay ku saleysnaan karaan waqti isku mid ah (FTE) ama qiimaha maalin kasta. Nagala soo xiriir si aad u ogaatid sida ay kooxdayada R & D xirfad u leeyihiin inay ka dhigtaan mashruucaaga xigga ee guusha ugu dambeysay.